Phunga Igazi Nokwesaba Kukhandlela Elisha Labahlali 7 4D - iHorror
I-Psychological Horror (okuthokozisayo)
Okungajwayelekile futhi Okungajwayelekile
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Iphunga Igazi Nokwesaba Kukhandlela Elisha Labahlali 7 4D
Iphunga Igazi Nokwesaba Kukhandlela Elisha Labahlali 7 4D
by admin January 5, 2017
by admin January 5, 2017 1,035 ukubukwa
Kubhalwe nguShannon McGrew
Abalandeli abaningi abesabekayo bajwayelene ne- "Owakhile omubi" i-franchise, babengeke kanjani babe?
Lowo mkhathi ube yisisekelo phakathi kohlobo olwesabekayo selokhu umdlalo wevidiyo waphuma ngo-1996 nefilimu ngo-2002. Ngokulindelwa komdlalo wabo omusha,"Isakhamuzi Esibi 7: IBiohazard", Engenisa ababukeli emkhakheni wezokuzijabulisa we-4D ngoJanuwari 24, inkampani eyodwa ifuna ukufaka inzwa yakho phambili.
Umthengisi weGeek uMerchoid uzokhipha a "Isakhamuzi Esibi 7: Igazi, Umjuluko, Nokwesaba Ikhandlela le-4D VR" ekugubheni isitolimende sakamuva.
Uma cishe ungaphakathi Owakhile omubi akwanele, abadali besivumelwano esinegazi baziklama ngendlela yokufaka umuzwa wakho wokuhogela, bakunikeze isipiliyoni esithuthukisiwe, ngaphesheya kwamagogolo.
Angiqiniseki ukuthi ngabe yinto enhle leyo, kepha kufanele ngivume ukuthi nginentshisekelo. Abaqambi bathi iphunga lizokhumbuza “izingodo ezindala, isikhumba, mhlawumbe negazi ...” okuyisinyathelo esingaphezulu kwephunga lezidumbu ezibolayo.
Ngokuqondene nephunga elisalele? Amakhandlela enzelwe ukuhlala cishe amahora angama-18-20 futhi anenani lentengo elingu- $ 18.99 elingagcini kakhulu lapho uthola ikhandlela lekhwalithi - noma ngabe lizungeze ukufa, ukubhujiswa, kanye nokushona.
Kubukeka sengathi amakhandlela awakathengiswa okwamanje kwiwebhusayithi, kepha nginomuzwa lapho nje engezwa, azothengiswa, ngakho-ke qiniseka ukuthi uhlala ubheka eMerchoid.
Le nto kumele ube nayo, ikakhulukazi uma ufuna ukuyihlanganisa nesipiliyoni sakho sokudlala lapho udlala "Isakhamuzi Esibi 7: IBiohazard".
Kimi, ngijabule nje ukubona amakhandlela aklanywe ngemuva kwamafilimu nabalingiswa bethu abathandayo futhi ngilangazelela ukuqhubeka neqoqo lami lamakhandlela agcwele ukwesaba. Kuhlala kuyisiqalo esihle sengxoxo.
buyekeza: Amakhandlela athengiswa aphela eMerchoid, kodwa asatholakala ngeNumskull.
Dlulisa amehlo kuma-Cateories
Dlulisa amehlo kuma-Cateories Khetha Category I-4K UHD (4) I-Amazon (i-movie) (7) I-Amazon (uchungechunge) (12) I-AppleTV + (6) Imisebe ye-Blu (18) Amahlaya Ahlekisayo (49) Amahlaya (14) Izinto Ezipholile Zokuthenga (18) Izinto Ezintsha Zokukwenza (5) Izindaba Zokuzijabulisa (1) I-Facebook (uchungechunge) (1) Izinganekwane (44) Kutholakale amavidyo (28) I-Gore (24) Izinkukhu (3) I-HBO (ama-movie) (6) I-HBO (uchungechunge) (7) Izincwadi zeHorror (62) Izindaba zeHorror Entertainment (10,970) Ama-movie asabisayo (421) Uchungechunge lwe-Horror (125) Ama-Horror Subgenres (10) IHulu (uchungechunge) (6) Izingxoxo (i-movie) (42) Izingxoxo (uchungechunge) (5) I-LGBTQ Horror (42) Uhlu (ama-movie) (40) Uhlu (uchungechunge) (2) Imakethe (21) I-Monster Horror (9) Isiqeshana se-Movie (2) Ukubuyekezwa kwe-Movie (62) Ama-movie (15) Umculo (38) INetflix (i-movie) (32) INetflix (uchungechunge) (46) Okungeyona inganekwane (5) I-Paranormal (76) I-Psychological Horror (thrillers) (53) Uchungechunge (1) Ukubuyekezwa kochungechunge (9) Ukuqhaqhazela (i-movie) (54) Ukuqhaqhazela (uchungechunge) (19) I-Slasher (4) Okungajwayelekile futhi Okungajwayelekile (39) Ama-Movie wokusakaza (104) Uchungechunge Lokusakaza (44) Amathoyizi (4) I-trailer (Imidlalo) (1) I-trailer (i-movie) (279) I-trailer (uchungechunge) (49) Imidlalo yama-trailer (1) Ubugebengu Bangempela (49) Uchungechunge lwe-TV (4) Imidlalo Yevidiyo (189) I-YouTube (i-movie) (3) I-YouTube (uchungechunge) (13)
'Ngiyazi Okwenzile Ngehlobo Eledlule': I-Amazon ...
UMartin Short, uSteve Martin noSelena Gomez Ingabe ...
UHulu's 'Hellraiser' Reboot uyiJaw-Dropping NgokukaDavid ...
I-TIFF 2021: 'Awuyena Umama Wami' Okuphakelayo ...
Isizini 2 se- 'Locke & Key' sibuyele emuva ...
@ 2021 - Konke Kulungile Kugcinwe.